खाल्डो पुराण - गजु Real - साप्ताहिक
यो साता देश खाल्डोमय भएको छ । खाल्डोमा एउटी बालिका खसेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि खाल्डो अझ चर्चित भयो । त्यो ह्दयविदारक भिडियोले धेरैलाई रुवायो पनि । जनता रोएको भिडियो सार्वजानिक भएपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीको नजर पुुग्यो अनि उहाँले तमाम खाल्डो पुर्ने आदेश दिनुभयो ।
खाल्डो खन्ने आदेश जसले दियो, त्यो सानोतिनो मान्छे पक्कै होइन । वर्षामा पानी पर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थियो होला उसलाई । काठमाडौंमा वर्षे पानीको निकास हुँदैन भन्ने पनि ज्ञान थियो होला । निकासविहीन पानी खाल्डामा पर्छ भन्ने जानकारी पनि पक्कै थियो । विकल्पविहीन जनता त्यो खाल्डोमा खस्ने खतरा पनि छ भन्ने बुद्धि पनि पक्कै होला ।
तैपनि मध्यवर्षामा पर्ने गरी खाल्डो खनेर पहिलो मुख्र्याइँ भएको छ । दोस्रो, खाल्डो पुर्न प्रधानमन्त्रीकै आदेश आउनुपरेको छ । तेस्रो, फेरि खन्नुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै भटाभट पुर्न थालिएको छ । पूर्ण योजनाबिनै खनिएको छ । त्यसरी नै पुरिंदैछ । यो खाल्डो पुरेको होइन, टालटुल मात्र गरिएको गजुरियल ठम्याइ छ ।
आज प्रधानमन्त्रीको आदेश आयो, खाल्डो पुर्ने काम सुरु भयो । भोलि राष्ट्रपतिको आदेश आउँछ, खन्ने काम सुरु होला । त्यसपछि गृहमन्त्रीको आदेश आउला, खाल्डोको सुरक्षाको कुरा आउला । राष्ट्रपतिको आदेशमा एक भएर जाने कुरा आउला । अन्तिममा सर्वोच्च अदालतको आदेश आउला, त्यसपछि पुर्ने र खन्ने दुवै काम गर्ने होला ।
यसरी अघि बढ्दै जाँदा खाल्डो एउटा हिन्दी टेलिश्रृंखलाजस्तो होला, जुन कहिल्यै टुंगिँदैन । जे होस्, हामी अहिले खाल्डोको पहिलो श्रृंखलामै छौं । अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीमा मात्र सीमित छ खाल्डो । यसलाई पनि सौभाग्य नै मान्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको आदेशपछि खाल्डो पुर्ने काम धमाधम भैरहेको छ । खाल्डो पुर्ने धमाधम हेर्दा लाग्छ, केही दिनभित्रै काठमाडांै खाल्डो पूरै पुरिनेछ । काठमाडौं नै पुरियो भने उपत्यकावासी पनि खाल्डोमा पुरिने भए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सम्भवत: अर्को अर्को आदेश जारी गर्नुहुनेछ, पुरेका खाल्डाहरू तुरुन्त खन्नू अनि काठमाडौं पुन: उत्खनन हुनेछ ।
खाल्डो पुर्ने आदेश तब मात्र आएको थियो, काठमाडौंमा खाल्डोले एक जनालाई खाएको थियो भने अर्कीलाई जनताले जोगाएका थिए । खाल्डो पुर्ने काम कसको हो, त्यो त्यसैलाई थाहा होला । हामीलाई थाहा भएको कुरा के हो भने खाल्डोका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको आदेश आएपछि मात्र काम सुरु हुँदो रहेछ । अब उठ्ने गम्भीर प्रश्न हो, जाबो खाल्डो पुर्न प्रधानमन्त्रीकै आदेश चाहिने हो कि खाल्डो पुर्न जाबो प्रधानमन्त्रीको आदेश चाहिने हो ?
खैर, खाल्डो पुर्ने काम चलिरहेको छ, तर खाल्डो पुरकहरूको तदारुकता देख्दा पुर्ने होइन, छोप्ने खतरा छ । किनभने प्रधानमन्त्रीले १५ दिनको आदेश दिनुभएको छ । यति धेरै खाल्डा पुरेर सकेनन् भने छोपेर भए पनि त काम चलाउनुपर्‍यो । काम छिटो गर्नु छ, किनभने प्रधाममन्त्रीको आदेश छ । तलबाट झ्यासझुस हालेर माथिबाट माटोले छोपछाप पार्न बेर छैन ।
मानौं प्रधानमन्त्रीको आदेशअनुसार खाल्डो पुरेछन् भने पनि फेरि खाल्डो खन्ने आदेश आउने खतरा छ । किनभने यहाँ खन्ने र पुर्ने काम कुनै योजनाअनुसार हुने गरेकै छैन । खासमा खाल्डो उपत्यवासीलाई पानी ख्वाउन खनिएको हो । अहिले मेलम्चीको काम नसकी पुरियो भने मेलम्चीका तर्फबाट जलस्रोतमन्त्रीको आदेश आउनेछ— तुरुन्त खाल्डो खन्नू ।
मन्त्रीको आदेशपछि कर्मचारीहरूले पुन: खाल्डो खन्न सुरु गर्नेछन् । खाल्डो खनिसक्न पाएको हुँदैन, सडकपीडितहरूको आक्रोश बढ्नेछ, किनभने खाल्डो खन्दा पनि पुर्दा पनि सडकले समस्या बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
यातायात मन्त्रीले तुरुन्त सडक निर्माण गर्न आदेश दिनेछन् । मन्त्रीको आदेशपछि सडक विभागका कर्मचारीहरू पिच गर्न थाल्नेछन् । पिच गरेर आधाउधि पुगेपछि ऊर्जामन्त्रीको आदेश आउनेछ । सडकनजिकको बस्तीमा बिजुली बाल्नुपर्ने भएकाले तुरुन्त पोल गाड्ने । त्यसपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू पिच खन्न थाल्नेछन् ।
यसरी खन्ने, पुर्ने, गाड्ने र छाड्ने काम निरन्तर भैरहेको थियो, भैरहेको छ र भैरहनेछ । यसको स्थायी समाधानको योजना ल्याउन पो आदेश दिने कि प्रधानमन्त्रीज्यू ?
मंगल ग्रहमा खाल्डो खनियो
गरुड पुराण घोषणा
किन मनाइन्छ गाईजात्रा ?
प्रकृतिसँग आत्मसमर्पण असार ३१, २०७५
वल्र्डकप फिभर असार १८, २०७५
हाँसोको मुहान खोज्दै जाँदा असार १०, २०७५
हाँसोको मुहान खोज्दै जाँदा जेष्ठ २९, २०७५
हाँसोको मुहान खोज्दै जाँदा–५ जेष्ठ २२, २०७५
हाँसो मुहान खोज्दै जाँदा–४ जेष्ठ १९, २०७५
हाँसोको मुहान खोज्दै जाँदा–३ जेष्ठ १०, २०७५
हाँसोको मुहान खोज्दै जाँदा—२ जेष्ठ ५, २०७५
हाँसोको मुहान खोज्दै जाँदा— १ वैशाख २४, २०७५
सिनेमा खेलिनँ, किन खेलें ? वैशाख १०, २०७५